आगामी नोभेम्बर ७ मा अष्ट्रियामा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता हुँदै | आगामी नोभेम्बर ७ मा अष्ट्रियामा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता हुँदै – हिपमत
नेपाली युरोपियन खेलकुद संघ (एनआइएससी) को आयोजनामा आगामी नोभेम्बर ७ तारिखमा खुल्ला भलिबल प्रतियोगिता हुने भएको छ ।
उहाँका अनुसार लगातार ३ वर्ष विजयी हुने टिमलाई नगद २ हजार युरोसहित ट्रफी प्रदान गरिनेछ । प्रतियोगितामा सहभागिता हुने टिम दर्ता अक्टुबर २५ तारिखभित्र गरिसक्नुपर्ने अध्यक्ष घमालले बताउनुभयो । घमालका अनुसार तोकिएको समयभित्र उपस्थिति नहुने टिमले प्रतियोगितामा सहभागिता हुन पाउने छैन ।
“खेलकुदका माध्यमबाट युरोपमा रहेका नेपालीहरूबीच चिनजान हुनुका साथै विदेशमा रहेर पनि नेपालीहरूले मुलुकको कला र संस्कृतिको विकासमा योगदान दिइरहेका छन् भन्ने प्रस्ट हुन्छ,” अध्यक्ष घमालले भन्नुभयो, “प्रतियोगितामा सांस्कृतिक नृत्यसमेत प्रस्तुत हुनेछ । जहाँ बसेर जे गरे पनि जन्मभूमि र कर्मभूमिकै लागि गरिरहेका हुन्छौं ।” खेलकुदलाई आत्मसात गरेमा मान्छेले महँगो हिरा, मोती, सुन, चाँदी लगाउनै नपर्ने घमालको भनाइ छ ।
खेलकुदलाई पनि गहनाका रुपमा आत्मसात गरेमा जीवन सार्थक हुने उहाँको विचार छ । “खेलकुदले मानिसको शारीरलाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ,” अध्यक्ष घमाल भन्नुहुन्छ, “यदि मानिसको शरीर नै स्वस्थ छैन भने अर्बौं धनसम्पत्ति भएर पनि के गर्नु ? अर्कातर्फ खेलकुदले आपसी सम्बन्ध बढाउनुका साथै मनलाई शान्ति प्राप्त हुन्छ ।”
सुनसरीको दुहबीमा प्रथम मेयरकप क्रिकेट प्रतियोगिता सुरु
आईपीएलमा यी खेलाडीको कमाइ ४० गुणा बढ्यो, अब कति पारिश्रमिक ?
नेयमार ८ हप्ता मैदान बाहिर रहने
मोरगंको जहदामा प्रथम जहदा फुटबल प्रतियोगीता सम्पन्न
इंग्ल्याण्ड अर्को वर्ष हुने कतार विश्वकपका लागि छनोट